Qurxinta Wajiga Dumarka Iyo Sanjabiisha - Daryeel Magazine
Daryeel Magazine home
Qurxinta Wajiga Dumarka Iyo Sanjabiisha
Waa dawo-guri dabiici ah waxaa loo adeegsadaa in lagu daweeyo xanuuno badan sida hargabka, madax xanuunka iyo wixii la mid ah. Sidoo kale sanjabiishu waxay leedahay faaidooyin badan oo dhanka quruxda ah waxayna ay aad ugu fiican tahay qurxinta wajiga dumarka iyo timaha.
Waxtarka dhanka quruxda ah ee sanjabiisha waxaa ka mid ah:
Sanjabiisha waxay yareysaa nabraha wajiga iyo finanka, waxayna wajiga ka dhigtaa mid jilicsan oo sabiibax ah.
Waxay iftiimisaa maqaarka.
Sanjabiishu waxay cusboonaysaa maqaarka, waxayna ka difaacdaa gabowga.
Sanjabiishu waxay korisaa timaha, waxay kordhisaa wareegga dhiiga ee madaxa taasoo muhiim u ah koritaanka timaha. Faytamiinnada macdanta iyo dufanka wanaagsan ee ku jira sanjiibasha waxa uu timaha ka adkeeya salka tasoo ka hortagaysa inay timuhuu daataan. Waxaad isku qasan kartaa saliid qumbe iyo sanjabiil kadibna timaha ayaad marsan kartaa, u daa 30 daqiiqo kadibna iskaga mayr biyo iyo shaambo.
Sinjibiisha waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu fiican ee lagula dagaalamo agoolka. Waxaad isku darsan kartaa sanjabiil fresh ah iyo saliid macsaro kadibna madaxa marso adigoo u daynaya mudo 15 ilaa 25 daqiiqo ah.
Muuqaalkaan hoose ka daawo sida wajiga loogu qurxin karo waxaana soo diyaariya Hafza (Cooking With Hafza).
Qurxinta Jirka Iyo Sirta Hafza
Timaha Kasoo Baxa Wajiga Dumarka
Bunka Iyo Caddaynta Wejiga
Bunku waxa uu kaalinta labaad kaga jiraa liiska badeecadaha loogu ganacsi badan yahay dunida oo …
Leave a Reply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Nagala Soco Facebook
English Articles	The health & other benefits of Ramadan fasting
June 4, 2017	How to attain a happy life in this world & the next
May 21, 2017	TOP RATED	15 Qodob Oo Nin Kasta Ka fisho Xaaskiisa
September 3, 2016	10 Dariiqo Oo Aad Ku Noqon Karto Qof Mustaqbal Ifaya Leh
December 4, 2015	Tilmaamaha Gabadha Wax Jecel
March 3, 2015	Hababka Maareynta Walwalka Ardaynimada
February 17, 2015	Calaamadaha Lagu Garto Dadka Kartida Alle Ku Manaystay
September 23, 2014	Daryeel Magazine	Copyright © 2017 daryeelmagazine.com - All Rights Reserved.